မြန်မာ့ဂေဇက်ရွာသူားတွေရဲ့ တတိယအကြိမ်တွေ့ဆုံပွဲနဲ့ ဆုပေးပွဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Best Web Awards » မြန်မာ့ဂေဇက်ရွာသူားတွေရဲ့ တတိယအကြိမ်တွေ့ဆုံပွဲနဲ့ ဆုပေးပွဲ
မြန်မာ့ဂေဇက်ရွာသူားတွေရဲ့ တတိယအကြိမ်တွေ့ဆုံပွဲနဲ့ ဆုပေးပွဲ
Posted by Ma Ma on Jan 12, 2014 in Best Web Awards, Photography | 101 comments
ရွာကွန်ဖရန့် ရေးမိရေးရာ လက်စမ်းစာပေ
အားကျဂုဏ်ယူစရာ ပရိုလိုင်းပေါ်က ရွာသူားတွေရဲ့ လက်ရာတွေ
သဂျီးနဲ့ ခိုင်ဇာတို့ပို့လိုက်တဲ့ ဆုလက်ဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေ
မအိလက်ရာ ကော်ဖီနဲ့ ဆင်းဒ၀စ် ဘရိတ်ဖတ်စ် မိုက်မှမိုက်
ဆုပေး ဆုယူပုံတွေ https://www.facebook.com/maw.myintmyint/posts/404246009706782 မှာလည်း ရှိသေးတယ်။
ဒါဇင်ပလပ်စ်လက်ဆောင် ကျောက်နဲ့နှင်းအတွက် မင်္ဂလာကိတ်
Group photo တော့ မရလိုက်ဘူး။
ဟိုလူကြီးတွေပါတော့ ပိုပြီး ပွဲစည်သွားတယ် …
မထင်ထားသူတွေလည်း လာဖြစ်ခဲ့တယ် …
သဂျီးညီ ဆိုတဲ့ လူကြီးကတော့ ပြောသွားသေးတယ် …
သဂျီး ပျံလာယင် ဂဲနဲ့ဝိုင်းထုဂျဘာဒဲ့ … ငိငိငိ
စီဂျေ မာမား၊Gentlemen တွေကို မိသွားတယ်။
သူများကိုပြောချင်စိတ်ကများနေလို့ Gentles ဖြစ်သွားတယ်။
မအိ ဆင်းဒ၀စ်ကို မကုန်နိုင်ပါဘူးထင်ထားတာ ၄ခုလုံးဘယ်လိုကုန်သွားမှန်းတောင်မသိဘူး။ကောင်းလိုက်တာ။
ကောင်းတယ်ချီးကျူးလို့ ပင်ပန်းပေမယ့် ပျော်ပါတယ်..မရေ…
အမှန်​အတိုင်း​ပြောရရင်​ ​နောက်​တစ်​ဗူး ထပ်​ဆွဲချင်​​သေးတာ
အဲဒ​ကြောင့်​ ..​နောက်​တပွဲထပ်​​ကြွေးမှာကို မရှက်​မ​ကြောက်​​မျှော်​ရင်း
မနက်စာမီလိုက်ဘူးတော့ .. နည်းနည်း တော်တော်လေး နောက်ကျသွားတယ် . .
လူမများလောက်ဘူးလို့ အစကထင်ထားတာ –
တကယ်ကျတော့ လူအစုံဆုံးပွဲ လို့တောင် ပြောရမလို….
ရွာသူားတွေရင်ထဲက ဂဇက်သံယောဇဉ်ကို တွေ့မြင်ကြည်နူးမိပါတယ်….
မနေ့ကတည်းက ဓာတ်ပုံတွေကို ဖဘ မှာ ထိုင်စောင့်နေတာ။
ငှက်ကထဂျီး မိုက်မိုက် စိတ်အေးရပြီပေါ့လေ။
လျှို့ဝှက် ဂဇက် စာအုပ်ပြန်ရပြီလား အာတီဒုံ။
ပန်းဆီရောင် နာ့ ယောက်ခမွဘေးမှာ နာ့ မက်မှန်လေးးးးးး ပြုံးလို့။
နောက်ခါ မမ လာမှ ထမင်းကြော်ကျွေးမယ်။
ချစ်မှ ကို အာတီဒုံ ဓာတ်ပုံမှာတွေ့လိုက်တယ်။ လှလို့။ ပြုံး/ပျော်လို့။
ငါးခူပြုံး ငါးသလောက်ပြုံးလောက် လှရုံလေး ပြုံးဖို့ဟာ ……..
အန်တီကေဇီပေးတဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုမှမရလိုက်ဘူး.. ငမတ်လုပ်တာ.. သူလဲမရလိုက်ဘူး.. အဲဒီတော့ ကမတ်နဲ.တားတားနဲ.အတွက်.. တစ်လုံး ပို.လိုက်..လက်ချောင်.. ခိခိ
ရေသန့် အလုံးတွေ။ :mrgreenn:
တစ်ယောက် ၆ လုံး ဝေယူကြလေ။ :mrgreenn:
ပျံလာရင် မြင့်မြင့်က ပျံလာနော်… သဂျီး အပင်တွေနဲ့ မလွှတ်ရင် အကုန်ညိကုန်မှာစိုးလို့ ပြောဒါဘာ….
သဂျီးရေ…. သုံးကြိမ်မြောက်မှာ အရောက်လှမ်းပြီး ၀မ်းသာပီတိဂွမ်းဆီထိခဲ့ပါတယ်။
ကိုယ့်အိမ်ကို မပြန်တာကြာတော့ နွေးထွေးမှုတွေနဲ့ သဂျီးရဲ့အေးရိပ်လေးတစ်ခုပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။
သွက်လိုက်တဲ့ မမ ပါလား…ပုံလေးတွေတင်ပေးတာကျေးဇူး…
နောင်ဆိုရင်တော့ မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေဦးဆောင်ရင် ဒီထက်ပိုသာပါလိမ့်မည်။
ဆုပေးသူ နဲ့ ဆုယူသူပုံမှာ
တကယ်တော့ ကျနော်က ကိုယ်စားယူပေးရတာပါ ၊
ကိုဇော်သန့်ကိုယ်စား ( သန့်ချင်းတူတဲ့ ) ကိုမျိုးသန့် ယူပေးပါ ဆိုလို့ ၊
.. အဲ့လိုလား.. ကျေးဇူးပါဗျို.. :D
” အကြွေးဆပ်ခြင်း ” ဆိုတဲ့ပုံက ၊
ဘာ အဓိပ္ပါယ်လဲဟင် ။
ရွာသားတစ်ယောက် ပြီးခဲ့တဲ့တွေ့ဆုံပွဲတုန်းက ပျက်ကွက်ခဲ့တာကို အကြွေးဆပ်ပြီး သူ့မဒမ်ရော ကိုယ်ပွားတွေပါ ခေါ်လာလို့ အကြွေးဆပ်ခြင်းလို့ နာမည်ပေးလိုက်တာ။
ခုတပတ်ပျက်ကွက်တဲ့ FR လည်း အကြွေးဆပ်ရမှာမို့ နောက်တကြိမ်တွေ့ဆုံပွဲကျရင် ပဲ့ကိုင်ရှင်ကို ခေါ်လာဖို့ စီစဉ်ထားအုံး။
” ပုံရိပ်​​ယောင်​တို့ ဆုံတဲ့ပွဲ ” လို့ တွေးမိနေဦးမှာပါ
” ပုံရိပ်​​ယောင်​တို့ ဆုံတဲ့ပွဲ ” တယ်ဆိုတဲ့ စာပါလား။
အဲဒီနာမည်လေး ကြိုက်လို့ နောင်သုံးဖို့ မှတ်ထားရမယ်။
ဆန်းဒ၀စ်ကလဲကောင်း..အစားအသောက်နဲ့ အစီအစဉ်ကလဲကောင်း… အလွန်ပျော်ပါတီ
အလွန်ပျော်တာ အကြွေးသိမ်းမယ့် ချစ်တီးမကြီးဖြူ ဖွေးလိုက်လာလို့လည်း ဖြစ်ရမယ်။
.. မလာနိုင်တဲ့အတွက် ပုံတွေကိုပဲ အားပေးသွားပါတယ်.. စားကောင်းမဲ့ ပုံပဲဗျ.. :D
စာမူဆုရှင် ဇော်သန့်ကို လာစေချင်တာ။
ဒါမှန်းသိ .. ခဲနဲ့ထုပါတယ်..အဟီး
မျက်မှန်နဲ့ နှုတ်ခမ်းမွှေး ပျောက်နေတာကြောင့် လွှတ်ပေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း… :mrgreenn:
သူကိုင်လာတာ က ပန်းသီးကြီး။
သူကြီးက ရေခဲသေတ္တာထဲတောင် ပန်းသီးမထားလို့ ပြောခဲ့ဘူးတာလေ။
ပန်းသီးဘဲသုံးတယ်ဆိုတဲ့ သမီးတော် လေး နေ ကောင်းလားးးးးးးးးးး
စုံထောက် ကိုမြင့်ကျော်တပည့် စွယ်တော်ရွက်ပဲ၊
တဂျီးက ဘာဘရီ တံဆိပ် ကျွဲကော်ကိုင်း ပါဝါမျက်မှန်တတ်တယ်။
မသင်္ကာရင် ချွတ်ကြည့်ကြ။ မျက်မှန်ကို။
သဂျီးကိုယ်တိုင်တဲ့လား… အား ဟိ
ဂဇက်ပွဲပြီးတော့ သူတို့နှစ်ယောက် သွားချင်တယ်ဆိုလို့…
“…..” နေရာကို ကိုယ်တိုင် မောင်းပို့လိုက်ရတာ ကျောက်စ် နဲ့ နှင်း ခင်ဗျ…
ဖော်လိုက်ရမလားဟင်… ဟီ ဟိ…
ဝိုင်းဝန်းကူညီကြတဲ့ ဝိုင်းတော်သားများကို အထူးကျေးဇူးပါ…
ပုံအားလုံးနဲ့တကွ အထူးဧည့်သည်တော်နှစ်ယောက်ရဲ့ပုံကိုပါသိမ်းဆည်းလိုက်ကြောင်း ခွက်ဒစ်ပေးပါတယ်
ဒီသဂျီးနှယ် ရွာသူားတွေကို အထင်စမောရန်ကောာာာာာာာ
ဒဂျီးဒ့ါပုံပြန်ရှာဒါ ဘယ်ထားမိမှန်းမသိလို့ ဂယ်ဘာဘဲ။
စားခဲ့ သောက်ခဲ့ပါကြောင်း………. :mrgreenn:
ဆရာဦးစောဝေကို ရွာထဲမှာ ပို့စ်လေးဘာလေး တင်ခိုင်းပါဦး…။ သူ့ကိုဘယ်သူ ရွာထဲခေါ်လာတာလဲ။ ဂုဏ်ယူစရာပါပဲ…။ လေးစားပါတယ် ဆရာစော..။
ဦးကြောင်တော့ ဟုတ်ပါတယ်နော်… :mrgreenn:
ကိုမာဃရေ..သူရွတ်သွားတဲ့ “ရန်ကုန်”ကဗျာလေး ဖြစ်နိုင်ရင်ရှာတင်ပေးပါလား..
လေးစားပါတယ် ဆရာစော……. တဲ့။
သာမီးလေးတွေ ရှိလို့လား မသိဘူး။
(ကြောင်ကြီးကို နောက်လိုက်တာ ဆရာစောကို မခန့်လေးစားပြုသလိုဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင် တောင်းပန်ပါတယ်။ ကြားထဲက တောင်းပန်ပေးပါ နန်းတော်ရာသူလေးရေ။)
ကိုစောဝေဆိုတာ….ကဗျာဆရာ ကိုစောဝေရေးသားခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ဆိုတဲ့ ကဗျာရဲ့ အစ စာလုံးတွေကို ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်“ အာဏာရူးကြီး မှူးကြီး သန်းရွှေ”ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ထွက်တာကြောင့် အာဏာပိုင်တွေက နိုင်ငံတော် အသရေဖျက်မှု ပုဒ်မ ၅၀၅ (ခ)နဲ့ စွဲဆိုပြီး ထောင်ဒဏ် နှစ်နှစ် ချမှတ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကဗျာကို ဇန်န၀ါရီလ ၂၁ရက်နေ့ အချစ်ဂျာနယ်မှာ ကဗျာဆရာ စောဝေက ရေးသားခဲ့ခြင်းပါ။ကိုစောဝေ ရေးသားတဲ့ကဗျာဟာ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၂၁ ရက်နေ့ထုတ် အချစ်ဂျာနယ်မှာ ဖော်ပြခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကဗျာ ပါပြီး နောက် ကိုစောဝေကို အာဏာပိုင်တွေက ဖမ်းဆီးပြီး အင်းစိန်ထောင်မှာ ချုပ်နှောင်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၈ မေလမှာ စီရင်ချက်ချပြီး နိုဝင်ဘာလမှာ ရမည်းသင်းထောင်ကို ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာပါ။
ကဗျာဆရာ ကိုစောဝေဆိုတာလည်း ကြားဖူးတယ်။ သိတယ်။
စာပေနဲ့ မနီးစပ်လို့ ကဗျာနဲ့ ကဗျာဆရာကို မတွဲမိတာ ခုမှပဲ သိတော့တယ်။
သာမီးလေးတွေရှိပါတယ်အန်တီမမ ကြောင်နာရှင်အစိုးရကြောက်လို့ မြန်းတျန့်မှာမထားဘူး
ဦးကြောင်ရေ တာမီးရန်ကုန်ရောက်ပြီးမှပဲ ရွာထဲဝင်ဖို့၊စာတွေတင်ပေးဖို့ သေသေချာချာပြပေးလိုက်ပါ့မယ်။
အချက်အလက်နဲ့တကွသေသေချာချာရှင်းပြပေးတဲ့ ဥက္ကဌကြီးဦးမိုက်ကိုလည်း ကိုယ်စားကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်
ဟမ်… ကိုရင်ကြောင် ဒီတစ်ခါ သက်တင်းနောက်ကျသွားပြီ…
ရွာထဲမှာ ဆြာစောရဲ့ တူမအရင်းခေါက်ခေါက်ရှိတယ်လေ…
အင်ထရိုကတော့ ဆြာစောရဲ့ဆိုင်မှာ ထမင်းသွားစားရင်း ပျိုးခဲ့တဲ့…
ကျောက်စ်မောင်နှံပေါ့ဗျာ… ဟီ ဟိ
အင်ထရိုဝင်ပေးထားတဲ့ ကျောက်မောင်နှံနဲ့ဦးဦးဆာကို ကျေးကျေးများများ။
ကျောက်မောင်နှံဆုံခဲ့တာကို မထင်မှတ်ပဲကြားရတဲ့နေ့က တကယ်ကိုဝမ်းသာမိတာပါ။
အခုလို အားလုံးကလှိုက်လှဲဝမ်းသာကျေနပ်တယ်ဆိုတော့ ကိုယ်တိုင်လာမယူဖြစ်တာတောင်
ကိုယ်တိုင်လာမယူဖြစ်တာတောင် ခပ်ကောင်းကောင်း လို့တော့လည်း မပြောပါနဲ့။
ကိုယ်တိုင်လည်းလာပြီး ဆုယူ၊ ပရိုလိုင်းပေါ်က ဦးလေးကိုလည်း ခေါ်လာရင် ပိုပြီး ပြည့်စုံသွားမှပေ့ါ။
ပွဲ ရှိတယ်ဆိုတာ လုံးဝမသိလိုက်တာပါ။
အဲ့နေ့ မနက်မှ ကိုမာဃကဖုန်းဆက်ပြီး
ဖုန်းဆက်ခေါ်တဲ့ ကိုမာဃ ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒီတခါမလာလိုက်ရတော့ နောက်တခေါက်မှ ပိုစားတော့မယ်ဂျာ……………………
နောင်….. တက်လူတွေ စီစဉ်မယ့်ပွဲမို့ အခုထက်ပို အောင်မြင်ပြည့်စုံမှာမို့ ပွဲတက်ဖို့ ခုကတည်းက ကြိုးစားထားးးးးးး
တွေ့ဆုံပွဲကိုလာခဲ့ဖို့ အများကြီးအားခဲထားတာ မလာ၇မှာဆိုးလို့
ရွာ့ပွဲတွေကို အားတက်သရောရှိတဲ့ မနိုကိုလည်း မျှော်နေမိတာ။
(မနိုရဲ့ လက်ချောင်တွေကြောင့်လို့ မထင်နဲ့နော်။)
ပျော်စရာကြီး။ ဒီပွဲကိုလာဖို့အားခဲထားတာ။ အနားရောက်မှ အကြောင်းတခုခုပေါ်လာမစိုးလို့ရင်တမမနဲ့။ အခုတော့ အောင်မြင်စွာတက်ရောက်နိုင်လိုက်ပါတယ်။ မျိုးဆက်သစ်ကလေးကလဲ သဘောတွေကျလို့
မျိုးဆက်သစ်လေးကလည်း အချိန်ကြာလာတော့ စိတ်ထဲ ရင်းနှီးလာတယ်ထင်တယ်။
အဲဒီကလေးလေး စကားပြောတာလေးကို သဘောကျတယ်။
မမ ရဲ့ အခုပထမဆုံး တွေ့ဆုံပွဲပုံတွေ ကို ဖွင့်ကြည့်ရတဲ့နေ့က ကွန်မကောင်းလို့ မြို့သာယာထဲဝင်မရခဲ့သမို့ မမန့်ခဲ့ရဘူး။ တွေ့ဆုံပွဲ ပုံတွေမြင်ရလို့ ကျေးဇူးပါ မမ ရေ။
ရွာထဲက မန်းသူားတွေကိုလည်း တွေ့ဆုံပွဲမှာ မျှော်နေမိကြပါသေးတယ်။
တွေ့ဆုံပွဲမှာ ကိုပေါက်ကတော့ ဖုံးကနေတဆင့် စကားပြောဖြစ်လိုက်သေးတယ်။
အရောက်လာခဲ့တဲ့ မန်းလေးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာမာဃကိုလည်း ကျေးဇူးတင်မိတယ်။
နောင်နောင်သောအကြိမ်တွေမှာ တွေ့ဆုံနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဓာတ်ပုံတွေ တင်ပေးတာ ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ။ ကိုကျောက်စ်နဲ့ မနှင်း ကိုမြင်ဖူးချင်နေတာ။ သူတို့စုံတွဲပုံလေးက ကြည်နူးစရာကောင်းလိုက်တာနော်။ တကယ်တော့ ဟင်းချက်ကောင်းတယ်ဆိုတာ နှလုံးသားလှတဲ့လူမှဖြစ်တာ။ ဟင်းချက်တယ်ဆိုတာ နှလုံးသားနဲ့ချက်မှ စားကောင်းတာလေ။ အသားမည်းသလောက် နှလုံးသားဖြူစင်တဲ့ကျောက်စ်ကို မနှင်း ရသွားတော့ မိန်းမချင်းတောင် မနာလိုတော့ဘူး။
ကျောက်စ်နဲ့နှင်း အိုအောင်မင်းအောင် ပျော်ရွှင်ပါစေ ဆုမွန်ကောင်းဖြင့်
ဓာတ်ပုံတွေ တင်ပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မမရေ။ ကိုကျောက်စ်နဲ့ မနှင်းတို့စုံတွဲကို မြင်ဖူးချင်နေတာ။ သူတို့စုံတွဲပုံလေးက ကြည်နူးစရာကောင်းလိုက်တာ။ တကယ်တော့ ဟင်းချက်ကောင်းတယ်ဆိုတာ နှလုံးသားလှတဲ့ လူမှ ဖြစ်တာလေ။ အသားမည်းသလောက် နှလုံးသားဖြူစင်တဲ့ ကျောက်စ်ကို မနှင်း ရသွားတာ မိန်းမချင်းတောင် မနာလိုဖြစ်မိတယ်။
ကိုကျောက်စ်နဲ့ မနှင်း အိုအောင်မင်းအောင် ပေါင်းရပြီး သက်ဆုံးတိုင်ပျော်ရွှင်ပါစေ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်နော်။
ဒီပွဲရဲ့စပွန်ဆာတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကျောက်စ်နဲ့ နှင်း တို့ ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ကြလို့လည်း ပွဲကပိုစည်ပြီး ပိုပျော်ဖို့ကောင်းသွားတယ်။
ရွာထဲက ပရိုတွေရဲ့လက်ရာစာအုပ်တွေပြထားတာမို့ ပြုံး ကိုယ်တိုင်တက်နိုင်ရင်လည်း အားလုံးပဲ ၀မ်းသာအားရဖြစ်ကြရမှာ။
အဲဒီထဲမယ် ကျောက် နဲ့ နှင်းကို အားကျပြီး မြှားနတ်မောင်ကို ပစ်ခိုင်းဖို့ ကြိတ်ကြံနေတဲ့ အင်္ဂလန်ပြန်ဘဆွေတစ်ယောက်လည်း ကဗျာဆရာ ကိုစောဝေနဲ့အပြိုင် ကဗျာရွတ်သွားတယ်ဆိုလားးးးးး
အင်္ဂလန်မားဆွေ မနေ့က ဒိုဟာ (ကာတာ) ကနေ မတ်စိပို့တယ်…
“ဟိုမြှားနတ်မောင်.. တေနာကောင်…”လို့ ကဗျာစပ်မိတာ မှားသတဲ့…
သူ့နေရာနဲ့သူ မျက်နှာချိုသွေးရမယ့်သူကို မျက်နှာချိုမသွေးမိလို့ နောင်တအကြီးကြီး ရပြီး မားဆွေ ဖြစ်သွားပြီထင်တယ်။
မားစည်နဲ့ နှစ်ယောက်သား ပုဝါကလေးနဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ပုံ တွေ့လိုက်တယ်။
ဒီကသာ လွမ်းနေ၇တာပါနော်…သူကတော့..အချစ်နဲ့တွေ့နေရတော့ ပျော့နေ..အဲ..ပျော်နေပြီပေါ့..
မပြုံးရေ… မင်္ဂလာဆုတောင်းအတွက် ကျေးဇူးပါခင်ဗျ…
ပြောရရင် ပွဲမတက်မယ်မှန်းသိထားပေမည့် မျှော်နေမိသေးတယ်…
ဟီ ဟိ… မပြုံးကမြှောက်ပေးတော့ ဟောသည့် ကျောက်စ်…
ချမ်းချမ်းစီးစီး စားဖို့သောက်ဖို့ချက်နေရတာ အားရှိသွားပြီ…
အခါအခွင့်သင့်ရင် မပြုံး တို့မြို့ကို အလည်လာခဲ့ပါဦးမယ်…
ဒါပဲနော်… အသည်းမကွဲချင်လို့ ငပိမစားဘူး… ဟီး ဟီး
မန်းဂေဇက်တွေ့ ဆုံပွဲကို မလာနိုင်ပေမယ့်…
ပုံတွေ ကြည့်ရတော့..ကိုယ်တိုင်ရောက်သလို ခံစားကြည်နူးရပါတယ်..မမရေ..
ပွဲကျင်းပနေချိန်မှာ ..ဒီကမနက် ၄း၀၀ လောက် ဖုန်းဝင်လာတော့ အချိန်မတော် ဘယ်က ပါလိမ့်လို့ ..ဇဝေဇ၀ါနဲ့ ကိုင်လိုက်တာ..
နောက်..လုံလုံ ဆိုတော့ တခုခုများဖြစ်လေို့ လ့ား…စိတ်ပူသွားတာ…( မောင်အံစာများ..နှိပ်စက်နေလား မသိဆိုပြီး…)
နောက်မှ ဒီနေ့ တွေ့ ဆုံပွဲအကြောင်းသိလိုက်ရတော့…မျက်လုံးကျယ် သွားတယ်…
သြော်..သူတို့ပျော်နေကြမှာဘဲ လို့ တွေးပြီး ကိုယ်တိုင်မလာနိုင်တာ… ကို စိတ်မကောင်းဖြစ်သေးတယ်..
စာပေနဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ ရွာသူရွာသားတွေကို တစ်ကယ် ခင်မင်ခဲ့တာပါ… နောက်ဖုန်းတစ်ချက် ၀င်လာပြီး..စကားပြောပြီးမှ
မနက် ၆း၀၀ နာရီမှာ အိပ်ယာဝင်ခဲ့တာ…။
အခုပုံတွေ ကြည့်ပြိး ၀မ်းသာတယ်..
ဖုန်းဆက်တဲ့ လုံလုံကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
ပုံတွေ တင်ပေးတဲ့ မမကိုလဲ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်..ဗျာ.။
ပဒုမ္မာပြောသလိုပဲ ရွာသူားတွေက ခေါင့်ကို နှုတ်ဆက်ချင်စိတ်တွေများနေလို့ နေ့မှန်း ညမှန်းမသိပဲ ဖုံးခေါ်လိုက်တာ။
ခေါင် ပြန်လာဖြစ်ရင်လည်း ပျော်ပျော်ပါးပါး တွေ့ဆုံချင်ပါသေးတယ်။
ကိုခေါင့်ဆီ Viber နဲ့ ခေါ်မယ်ရေးထားပြီး ခေါ်လိုက်မိတဲ့အချိန်မှာမှ နေ့နဲ့ည လွဲတာ သတိရမိတယ်။အားနာပါးနာနဲ့ တီဗွီကြည့်နေတာပါလို့များပြောသလား မသိပါဘူး။
ဘာပြောပြော ရွာသူားတွေကတော့ ချစ်ရတဲ့ ဦးခေါင်အသံကို ကြားရလို့ ကျေနပ်ကြပါတယ်။
ပျော်စရာကောင်းလိုက်တာနော်.. အန်တီအိက ဘာဆန်းဒွစ်လုပ်ပေးခဲ့တာလဲမသိ.. စားချင်လိုက်တာ.. :))
Cheese & Chicken ၂မျိုးတောင် ခရစ်ရေ။
အဲ့တုန်းက၂မျိုးမှန်း သိရင် ၂ဗူးစားပါတယ်။
မစ်စတာ အလက်ဆင်း အလွဲကြီး လွဲပါပေ့ါလို့ ငိုချင်းချနေပြီလား။
ကမ္ဘာရွာကြီးရဲ့ နာရီမှာ.. နေ့ညသတိထားရပါတယ်..
နယူးယောက်နဲ့ အယ်လ်အေ ၃နာရီကွာတယ်လေ…။
ဆြာခေါင်ကို နှောင့်ယှက်မိလို့ သဂျီးဆူခံထိပြီ
Lady last? ဒါကိုမကျေနပ်ဘူး။
ဒီလိုနားလည်မှုမလွဲသင့်ဘူး။ Lady တွေကိုဦးစားပေးချင်ပေမဲ့ မလိုသူတွေက အစာထဲမှာ အဆိပ်ခပ်ထားမှာစိုးလို့ စားသုံးရန်သင့်မသင့် ရှေ့ကနေ အသက်စွန့်ပြီး မြည်းနေတဲ့ အဘဆွေရဲ့စေတနာကို နားမလည်နိုင်ကြပါလားနော်။
အသက်စွန့်ပြီး ကာကွယ်ပေးကြတဲ့ သူရဲကောင်းတွေကိုမှ ပြစ်မှားမိလေခြင်းးးးး ဆိုပြီး ငိုချင်းရရမယ်။
ကိုနေချားရဲ့ အပြောလေးကိုထောက်ခံတယ်ဗျို့..သက်စွန့်ဆံဖျား ကာကွယ်ပေးခဲ့ကြသူ အဘဆွေနဲ့
ပြောပြလိုက်ပါ ကိုမိုက် ရာ…
အနစ်နာခံတတ်တဲ့ နှလုံးသားတွေ နဲ့ ရပ်တည်နေကြတာပါ ဆိုတာ..
ပွဲပြီးသွားတာတောင် အန္တရာယ်မရှိတာ မသေချာမှာစိုး လို့ ကျန်နေတာလေးတွေ ကို မြည်းပစ်လိုက်ကြ..အဲ.အဲ ဆက်ပြီး စမ်းသပ် နေကြသေးတာ ကလား..
တစ်ယောက်ဆို အစာ မသန့်လို့ တွဲတောင် ထုတ်လိုက်ရသေးတယ်…
ဘူဖေးတန်းစီနေတဲ့ထဲက လိမ္မော်ရောင်နဲ့ ချောချောလေးပေါ့ဂျာ….
အရင်တခါက….WOW ပြောတော့……WOW ဆိုတာ…..ဘောပြားဆို…..ခုတွေ့လဲမတွေ့ရဘူး……
ဟိုက်ရှ် ဘောပြားတဲ့တော့ ၀ါးဝိုးဝေါင်းရေ။ တန်တော့ တွေ့မရှောင်နဲ့အထင်လွဲပီထင်ဘာ့
ဟိ…. လူကြီးတွေ ခိုင်းထားတာ မလုပ်ရသေးလို့ ညက်နှာများတောင် မပြ၀န့်ပဲ ခုတစ်လော ရှောင်ကွန်နရီလုပ်နေမိတာ… ခုတော့ ဘောပြားဖြစ်ပါပေါ့လား….
ဒီဘောပြားက ဟောင်ကောင် ၁ ဘီလျှံဒေါ်လာတန်သလားဟင်
နာသာ ဟောင်ကောင်သွားရင် သထေးဖစ်ပီ… ကျောက်စ် လိင်ဗျံလက်မှတ် ပို့ဘာာာ
မီလျှံနာသူဌေးလောင်း ဝေါင်းကို ဟောင်ကောင်မသွားခင်ကြို ပြီး ဖားထားအုံးမှ
တွေ့မရှောင်နဲ့ဝါးကို ဘယ်သူအထင်လွဲတာတုန်း ယောက်ခမွ။
ဒေါက် .. ​ဒေါက်​ …..​ဒေါက်​
ဒီရွာက ရွာသူားတွေက ခင်တတ် မင်တတ် ဖော်ရွေတတ်ပါတယ်။
ဧည့်သည်နေ ဧည်သည်စား မဟုတ်ပဲ…
ကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ရာလို သဘောထားပြီး အခြေချနေထိုင်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
ဟို သီ ချင်း ထဲ ကလို ဘဲ
မ လာ နိုင် တော့ ရင် နာ မိ တယ်
ပို ရင် နာ စ ရာ ကောင်း တာ က
13-1-2014 ည မှာ ရန် ကုန် ကို အ ရေး ပေါ် ဆင်း လာ ခဲ့ ရ တယ်
နောက် ရက် ချက် ခြင်း မန်း လေးကို ပြန်ရ တယ်
ဘ၀ ကြီး က အဲ လို ကို မှား နေတာပါဗျာ
နောင် အ ကြိမ်တွေ ဆုံ အောင် ကြိုး စား ပါ မယ်
ကိုပေါက်ရဲ့ စနက်ရှော့မဟုတ်တဲ့ လက်ဆော့တွေ၊
ကိုပေါက်လက်ဆောင် မြန်မာပြည်မှအလှတရားများနဲ့ …………….
ခွဲမရတဲ့ ဂေဇက်ရွာရဲ့ တွေ့ဆုံပွဲတွေမှာ ရွာထဲမှာ သက်တမ်းအရင့်ဆုံးစာရင်းဝင် ရွာ့သက်တော်ရှည်ဘိုးဘိုးကြီးကိုပေါက် နဲ့ ဆုံချင်ပါသေးတယ်။
သက် တော် ရှည် တာတော့ ကြိုက် တယ်
ဘိုး တော် က တော့ မကြိုက်
မန်း လေး မှာ ဘိုး တော် ဆို တာ လူ လိမ်ကို ခေါ် တာ
ရှင်ဘုရင်တွေလက်ထက်က သက်တော်ရှည်ဘိုးဘိုးဆိုသလို ပြောလိုက်တာပါ။
ရွာထဲကို စအ၀င်မှာပဲ ရွာပွဲ နဲ့ စတွေ့သကိုး ….
တစ်နှစ်တစ်ခါ (လို့ထင်တာပဲ) ကျင်းပမယ့် နောက်တစ်ကြိမ်တွေ့ဆုံပွဲကျရင် ပျော်ပျော်ပါးပါး ခင်ခင်မင်မင် တွေ့ဆုံချင်ပါတယ်။
အလွန်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ပွဲကို မရောက်ဖြစ်တာ နာတာပဲဗျာ…ရွာကိုပြန်ေ၇ာက်နေပေမဲ့ ခရီးတွေပဲဆက်တိုက်ထွက်နေလို့ မန်းဂေဇက်ပွဲတွေမတက်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်…နောက်ထပ်တွေ့ဆုံပွဲလေးများရှိသေးရင်အကြောင်းကြားကြပါအုံးဗျာ…စာအုပ်တွေရော ထပ်ထုတ်ဖြစ်သေးလား…ဘယ်ဝယ်လို့ရနိုင်သေးလဲသိချင်ပါတယ်ဗျာ…
ဇော်မင်းတစ်ယောက် ရွာထဲမှာ ပျောက်နေတာ အတော်ကြာပါပေါ့လား။
နောက်ထပ်တွေ့ဆုံပွဲကတော့ လာမယ့်ဒီဇင်ဘာလောက်မှ ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။
ရွာ့အရေးတွေမှာ တက်တက်ကြွကြွပါဝင်တတ်/ခဲ့တဲ့ ဇော်မင်းကိုလည်း ရွာ့လူကြီးသူမများ၊ လူငယ်လူရွယ်များနဲ့အတူ ကျမကလည်း တွေ့ဆုံချင်ပါသေးတယ်။
အန်တီမမ တောင်းဆိုချက်အရ စတစ်ကီဖြုတ်လိုက်ပါပြီ။